धादिङमा 'होम ग्राउण्ड' बनाउँदै एनआरटी र आरसिटी ! - Khelpati
धादिङमा 'होम ग्राउण्ड' बनाउँदै एनआरटी र आरसिटी !
शुक्रवार, असार १२, २०७७ रमेश सुवेदी
धादिङ । न्युरोड टिम (एनआरटी) र रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) नेपाली फुटबल इतिहासकै चर्चित र पुराना क्लब हुन् ।
एनआरटी र आरसिटी काठमाडौंको रैथाने क्लब हो । आरसिटीले ६ पटक र एनआरटीले ४ पटक ए डिभिजन लिग जितेको छ ।
तर, यतिबेला दुवै क्लब काठमाडौं बाहिर निस्कने योजनामा छन् ।
बिहीबार मात्र दुई क्लबका पदाधिकारी राजधानी नजिकैको जिल्ला धादिङको भ्रमणमा आएका थिए ।
एनआरटीका अध्यक्ष सुन्दर जोशी र महासचिव नरेन्द्र श्रेष्ठ तथा आरसिटीका उपाध्यक्ष कुमार राज भण्डारी र सह सचिव रविन महर्जनले जग्गा निरीक्षण गरेका थिए ।
क्लबको घरेलु मैदान अर्थात् 'होम ग्राउण्ड' निर्माणका लागि जग्गा खोज्दै दुई क्लबका पदाधिकारी धादिङको धार्के आएका हुन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को पहलमा क्लबका पदाधिकारीले धुनिवेशी नगरपालिकाको पुरानो धार्केमा रहेको जग्गा निरिक्षण गरेका छन् ।
एनआरटी र आरसिटीका पदाधिकारीले भुवनेश्वरी माध्यामिक विद्यालयको मातहतमा रहेको करिब ३३ रोपनी जग्गामा फैलिएको मैदानको निरीक्षण गरेका थिए ।
दुवै क्लबले यस मैदानलाई आफ्नो घरेलु मैदानसहित एकेडेमी बनाउने योजना बनाएका छन् । क्लबले मैदानमा होस्टेल भवनसहित प्यारापिट समेत बनाउने जनाएको छ ।
तर, सम्पूर्ण भौतिक निर्माणका लागि जग्गा अपुग हुने देखिएको छ । क्लबले सुविधा सम्पन्न एकेडेमीसहितको मैदानमा लागि करिब ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
विद्यालयको मातहतमा रहेको यस मैदानमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश ३ सरकार र धुनिवेशी नगरपालिकाले १–१ करोड विनियोजन समेत गरेको छ । जसको कारण विद्यालयले १ करोड ८० लाखको टेन्डर सहित मैदान निर्माणको काम अगाडी बढाईसकेको छ ।
जग्गा निरिक्षणपछि एनआरटी अध्यक्ष सुन्दर जोशीले जग्गा लिनेमा क्लब सकारात्मक रहेको र राखेप, एन्फा र नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने बताए ।
‘जग्गा हेरेपछि सकारात्मक देखिएका छौं । चाडैनै क्लबको बैठक बस्ने छ । जग्गाको कुरा फाइनल भएसँगै एन्फा, राखेप र नगरपालिकासँग मिलेर काम अघि बढाउने छौं,’ चार पटक ए डिभिजन लिग जितिसकेको क्लबका अध्यक्ष जोशीले भने ।
नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले आफ्नो नगरपालिका क्लबहरुसँग मिलेर खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न तयार भएको बताए ।
‘नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रलाई गौरवान्वित बनाउन काम सुरु गरेको छ । खेल मैदान सहित पार्क बनाउने, नगर स्तरिय हस्पिटल, होटल बनाउने योजना ल्याएको छ । जसले गर्दा धुनिवेशी नगरपालिकाको प्रमोट हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘काठमाडौं नजिक रहेर पनि हाम्रो क्षेत्र केहि नभए जस्तो भएको छ । सफल टिम पाएको अवस्थामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौं ।’
यस्तै आरसिटीका सह सचिव रविन महर्जनले जग्गाप्रति क्लब सकारात्मक भएको बताए ।
एसियाली खेलकुद महासंघ (एएफसी) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रका क्लबहरुलाई लाईसेन्स प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । जसका लागि क्लबसँग होम ग्राउण्ड, आफ्नै एकेडेमी, युथ टिम अनिवार्य रहेको छ ।
एएफसीको नियममा बाधिएको क्लबले मात्रै एएफसीको आधिकारीक प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन पाउनेछन् । जसअनुसार एन्फाले राखेपको सहायतामा क्लबहरुलाई उपत्यका बाहिर लैजाने योजना ल्याएको हो ।
कोरोना भाईरसको महामारीबीच बिहीबार क्लबका पदाधिकारीसँगै राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली समेत धादिङ आएका थिए ।
पछिल्लो समय एन्फाको विरोधमा उत्रिरहेका धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दिपक खतिवडा भने निरीक्षणमा उपस्थित भएनन् । यद्यपि महासविच रामहरि थापा लगायत अन्य प्रतिनिधिले स्थलगत निरिक्षण गरेका थिए ।
उक्त टोलीले धादिङमा रहेका अन्य विभिन्न मैदानको समेत निरिक्षण गरेका थिए ।
टिमले धुनिवेशीकै बानियाटारमा नवनिर्मित खेल मैदान, थाक्रेको गनिशेचौर खेल मैदान, गजुरीको गलौदीको खेलमैदान र चरौदीमा बन्न लागेको मैदान निरीक्षण गरेका थिए । टोलीले सम्भावित दोस्रो मैदानको रुपमा गनिशेचौरलाई समेत हेरेको छ ।
निरीक्षणपछि एन्फाका अध्यक्ष शेर्पाले क्लबहरुको आफ्नै प्रशिक्षण स्थल नभएको र त्यसलाई मुर्तरुप दिन धादिङ झरेको बताए ।
‘अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार क्लबहरुको आफ्नै होम ग्राउण्ड चाहिन्छ । क्लबहरुको आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्र नभएकाले त्यसैको मुर्तरुप दिन अगाडि बढेका छौं,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
अध्यक्ष शेर्पाले उपत्यकाको क्लबलाई काठमाडौं बाहिर लैजाने योजना बनाएको र त्यसै अनुसार धादिङलाई फुटबलको केन्द्र बनाउने बताए ।
‘एन्फाले काठमाडौंका क्लबलाई बाहिर लैजाने सोच बनाएको छ । धादिङमा पनि २–३ क्लबलाई प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जसले धादिङलाई फुटबलको केन्द्र बनाउने छ ।’
मैदान निरिक्षणपछि सदस्य सचिब सिलवालले धादिङको अर्काे नाम खेलले पनि जोडिनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
‘काठमाडौं नजिकैको जिल्ला रहेको छ । सुरुङ मार्ग बनेसँगै क्लबलाई झनै सहज हुनेछ । यहाँ खेलमात्रै हैन खेलाडी उत्पादन देखि लिएर इकोनोमिक्स फाइदा पनि हुन्छ । स्थानियले राष्ट्रिय खेलाडीपनि देख्न पाउँछन् । अब, धादिङको अर्काे नाम खेलले पनि जोडिन्छ’ उनले भने ।
माल्दिभ्स फुटबलको अध्यक्षमा बासम निर्वाचित
राखेपमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरिने
प्रतियोगिताको हिसाबमा अनुसन्धान केन्द्रित
विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया
बक्सिङ संघको ध्यानाकर्षण
सिलवालले खोजे ऐनमा स्पष्टता
मोर्टजाको दोस्रो कोरोना रिपोर्ट पनि पोजेटिभ
रियललाई बिल्बाओ र बार्सिलोनालाई भियाको चुनौती
लिभरपुल र एस्टन तथा सिटी र साउथह्याम्पटन भिड्दै
सन्दीपले कुन टिमबाट सीपीएल खेल्छन् ?
श्रीलंकाका ब्याट्सम्यान मेन्डीस पक्राउ !